Buluugleey Somaali Information Service
REER JOWHAR OO KALA BADBAADIYAY LABADA GARAB EE DOWLADA KMG
Magaalo madaxda gobolka Shabeelada Dhexe ee Jowhar ayaa sanadka 2005 ka waxa ay noqotay meesha ay ugu hadal haynta badatay saxaafada gudaha iyo mida dibadaba guud ahaanba marka laga hadlayo arimaha Soomaaliya. Jowhar oo hoy u ah mid ka mid ah labada garab ee dowlada is khilaafsan ayaa si weyn uga macaashtay lacagta adag ee ka soo gashay martida iyo wufuuda kale ee buuxdhaafisay dhamaanba xaafadaha magaalada. Dhinac kale hadii aynu ka eegno, reer Jowhar waxa ay sabab u noqdeen in aanu ilaa iyo hada dagaal hubaysani dhex marin labada garab ee dowlada taasi oo ay u suurta galiyeen dhorka arimood ee hoos ku qoran;
1-Col. Cabdullaahi Yuusuf oo loo diiday in uu jowhar ka abaabulo dagaalo lagu waxyeelaynayo dadka muqdisho.
Col. Cabdullahi Yuusuf iyo taageerayaashiisa mintidka ah ayaa si weyn ugu dadaalay in ay abaabulaan ciidamo Soomaali iyo ajnabi isugu jira oo huwan magacyada ciidan qaran iyo nabad ilaaliyayaal oo cagta mariya Muqdisho iyo nawaaxigeeda si aan dib danbe loogu arag cid is hortaagta madaxweynanimada 25 ka sano loo soo dagaalamayay. Reer Jowhar ayaa waxaa u cuntami weyday in ay soo dhawaynta iyo marti gelinta madaxweynaha ugu daraan in uu magaaladooda ka dhigto dhufays uu uga duulo Muqdisho oo ah halka ay maatidoodu joogto maalkooduna yaal. Gudoomiyaha Gobolka Shabeelada Dhexe, Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere), ayaa is hortaagay in ciidamo la keeno degmada Jowhar marka laga reebo kun nin oo ah malayshiyooyin reer Puntland ah oo ay iyaga qudhooda laga mamnuucay wax dhaqdhaqaaq dagaal ah. Go’aankaa adag ee ay reer Jowhar qaateen ayaa waxa uu dhabar jab ku noqday qorshihii uu Cabdullaah Yuusuf doonayay in Jowhar oo Muqdisho u jirta 90km ay u noqon doonto qalcad adag oo uu ka hoggaamiyo dagaal lagu qaado gobolka Banaadir. Sidoo kale, waxa ay arintani kalsooni galisay dadka reer Muqdisho oo si aad ah isha ugu haya dhaqdhaqaaqyada ka socda Johar.
2- Hoggaamiye kooxeedyada Muqdisho oo aan ku dedegi karin dagaal ay ku qaadaan Jowhar.
Qabqablayaasha dagaalka ee Muqdisho oo caqabad weyn u arka joogitaanka Cabdullaahi ee Jowhar ayaan marnaba ku dedegi karin dagaal madaxweynaha looga saaro gobolka Shabeelada Dhexe. Waxa ay ogyihiin in hadii ay xabad ku ridaan Jowhar in uu dagaalku ka bilaabanayo Muqdisho, waayo, reer Jowhar xoog aad u weyn ayay ku leeyihiin Muqdisho. Waxaa ay taa ka jeclaan lahaayeen in uu Cabdullaahi u yimaado dhinacyada koonfurta iyo galbeedka caasimad halkaasi oo ay deegaan ahaan ku badnaan jireen beelaha aan hubaysnayn ee ay jabhadaha is cayrsanayaa marba dhinac ugu tuman jireen. Hadaba awooda ciidan ee reer Jowhar iyo saamaynta weyn ee ay ku leeyihiin Muqdisho ayaa ka mid ah sababaha waaweyn ee baajiyay dagaal dhex mara labada dhinac.
3- Reer Jowhar oo aan doonayn in uu ka daato dhaqaalaha badan iyo hubka ay ka heleen grabk dowlada ee martida u ah
Sidii aan horayba u soo sheegnay, Jowhar oo ay ku suganyihiin Col. Cabdullahi Yuusuf, Ra’isulwasaare Cali Maxamed Geedi iyo tiro badan oo ka mid ah golayaasha wasiirad iyo baarlamaanka, ayaa waxaa buux dhaafiyay martida dab raaca ah ee doonaysa in ay u sii dhawaadaan madaxda dowlada si loogu magacaabo darajooyin ay wax dhaqaale ah ka lufluftaan. Ninkii guri dhagax ah Jowhar ku lahaa noocii uu doonaba ha ahaadee maanta waa taajiray. Magaalada inteedi badnayd waxaa laga dhigay hoteelo iyo makhaayado. Badeeco kasta oo magaalada la geeyo dhulka ma dhacdo. Waxaa kale oo xusid mudan in uu maamulka gobolku si lixaad leh u dhisay awoodiisa ciidan iyadoo uu dhawaan la wareegay qalab milatari oo dowlada FKMG ah ka soo gaaray dalalka Talyaaniga iyi Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, dadka gobolka oo uu shaki weyni uga jiro inta ay fursadan sii haysan doonaan ayaa ku dadaalaya in ay damiyaan xiisada ka dhexaysa Muqdisho iyo Jowhar si aanay u joogsan mashaariic badan oo lagu hormarinayo gobolka oo hada gacanta lagu hayo. Dadaalkaa nabad doonka ah ee gobolka loogu faa’ideeyo ayaa isaguna qayb weyn ka qaatay ka hortaga dagaal ay labada dhinac ee dowladu fooda isku daraan.
Ugu danbayntii, cid kasta oo gacan ka gaysata ka hortaga dagaal hor leh oo ka qarxa dhulka Soomaaliya ayaa si weyn loogu amaani karaa, waxaanse shaki ku jirin in nabad ay keenaan dano dhaqaale amaba cabsi ay kooxi ka qabto guul daro dagaal oo ku dhacda in aanay marnaba keeni karin xasilooni iyo dowlad shaqaysa oo ay dadka oo dhan ku qanci karaan.
E mail: abdirizaq88@hotmail.com